Manchester City oo diyaar u ah inay qandaraas cusub gacanta u geliso David Silva | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Manchester City oo diyaar u ah inay qandaraas cusub gacanta u geliso David Silva
David Silva ayaa qarka u saaran inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxdiisa Manchester City, wuxuuna sii joogi doonaa illaa sannadka 2020ka.
Kubadsameeyaha reer Spain David Silva ayaa wuxuu Sky Blues kusoo biiray sannadkii 2010kii, muddo 10 sanno ah ayuuna ku qarash gareyn doonaa Man City haddii uu saxiixo qandaraaskaan cusub ee uu Isbuucii ku qaadato 160ka kun oo ginni.
Ilo ku dhow kooxda Man City ayaa u xaqiijiyey joornaalka Daily Mirror in Silva uu diyaar u yahay inuu saxiixo qandaraaskaan cusub, isla markaana uu ka mid noqdo liiska ciyaartoyda ugu mudada dheer taariikhda Man City.
David Silva ayaa 32 sanno jirsan doona bisha Jannaayo ee sannadka soo aadan. Wuxuuna xilli ciyaareedkaan ugu sarreeyaa caawinta horyaalka England Premier League isagoo caawiyey sideed gool. Bernardo Silva oo ay kooxdu 43 milyan oo ginni kula soo saxiixatay ayuuna booska kooxda koowaad kaga horreeyaa.
Silva wuxuu isha ku hayaa inuu guushii 19aad oo xiriir ah ka caawiyo kooxda tababare Pep Guardiola marka ay caawa wajahaan Southampton kulankaas oo ka tirsan horyaalka England Premier League.
Kooxo ka dhisan Spain iyo Italy ayaa xiiso u qaba saxiixa Silva.